WARARKA | Daafeet.com
Aqriso Warsaxaafadeed Ay Maamulka Jubaland Kasoo Saareen Xukuumada Dhexe
Kulan Looga Hadlayo Amniga Dalka oo Maanta Ka Dhacay Magalada Muqdisho
Daawo Lashin Mukhtaar Cusmaan oo Ka Hadlay Qaabkii Lagu Soo Degay Deeganada k Galbeed
Qarax Lala Beegsaday Mid ka Mid ah Shaqaalihii Ka Shaqeynayey Dhismaha Wadada Isku Xirta Afgooye iyo Xamar
Maxkamada ICJ ee Hague oo Sheegtey In Dhegeysiga Dacwada Bada Furmi Doonto Novembar 4
Daawo Lashin Xuseen Maxamuud oo Ka Hadlaaya Taariikhdii Saldanadii Geledi
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland oo Uga Digay Masuuliyiinta Ugu Sareysa Dowlada In Ay Mudo Kororsi Sameystaan
Dhegeyso Odayaasha Koonfur Galbeed oo Ka Digey In Sadbursi Lagu Sameeyo Doorashoyinka La Filaayo In Dalka Laga Qabto 2021
Aqriso Warmurtiyeedka Kasoo Baxay Shirka Dib u Hishiinta Beelaha Dega Galmudug
Alshabab oo Isku Deyeya Iney Xeraan Wadada U Dhexeysa Muqdisho iyo Jowhar
War-Saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyadda maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxaa looga hadlay Arrimo ay ka mid yihiin Amniga,Siyaasada, Abaaraha iyo baaq ku socda Beesha Caalamka.
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta guddoomiyay shir ay kasoo qayb galeen safiirrada wadamada amniga ka taageeraa Soomaaliya iyo wakiillada beesha caalamka, loogana hadlay amniga iyo xoreynta deegaannada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin dalka. Shirka ayaa intiisa badan looga dooday dardar-gelinta howl-gallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo in kaalmada amni ee dowladaha saaxiibka la ah Sooomaaliya loo qaabeeyo hannaan ...
Lashin Mukhtaar Cusmaan Xeydar oo ka mid ah Lashimiinta beesha Geledi ayaa waxaa uu si buuxda uga hadlay tixdan qaabkii lagu soo degey deegaanada reer koonfur galbeed iyo sida hada la rabo in loogu maamulo deegaanadooda shacabka reer koonfur galbeed.
Qarax ayaa saaka lala beegsaday qaar ka mid ah Injineerada dhismaha ka wada waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qaraxan oo ahaa miino ayaa lala beegsaday gaari HILUX ah oo ay wateen Injineeradaasi oo u dhashay dalka Turkiga, xilli ay marayeen agagaarka Jaamacadda Shabelle. Ugu yaraan illaa saddex qof ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi ...
Maxkamada Cadaaladda caalamiga ICJ ee fadhigeedu yahay Hague ayaa sheegtay in horaanta bisha November dib loo furi doono dhageysiga dacwada kiiska Badda ee u dhaxeeya dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamada ayaa sharaxaad ka bixisay-sharuudaha Suxufiyiinta, diblomaasiyiinta iyo xubnaha dadweynaha ee raba inay ka soo qeybgalaan dhageysiga. Dibloomaasiyiinta iyo Saxafiyiinta ayaa heysta in ay codsigooda ku soo gudbiyaan ilaa 24 bisha ...
Lashin Xuseen Maxamuud Dhiiga oo ka mid ah Lashimiinta beesha Geledi ayaa waxaa uu si buuxda uga hadlayaa tixdan qaabkii ay ahaan jirtey saldanadii beesha geledi iyo sida xaalka hada yahay.
Madaxweynaha maamul gobolleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo wareysi siinayay laanta Afka Soomaaliga ee BBC ayaa uga digay madaxda sare ee dalka in ay sameystaan muddo korarsi marka uu dhamaado waqtiga loo idmaday in ay dalka hoggaamiyaan. “Lama aqbali doono wax la yiraahdo muddo kororsi, maxaa yeelay dalkaan wuxuu ku jiraa geeddi socod siyaasadeed oo loo horseedayo inu hey’adihiisa caga ...
Qaar ka tirsan odayaasha koonfur galbeed ayaa ka hadley doorashooyinka la filaayo in ay dalka ka dhacaan 2021 wexeyna ka digeen in laga ilaaliyo sadbursi.
War murtiyeed ka kooban saddex bog ayaa laga soo saaray shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb iyadoo uu munaasabadii xiritaanka shirkana uu ka qeybgalay Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Dadka ku sugan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in saacadihii ugu danbeeyay waddada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar gaar ahaan deegaannada ku dhaw dhaw degmada Balcad soo buuxiyeen xoogag ka tirsan Ururka Al-shabaab. Dagaalyahannada Al-shabaab ayaa lagu waramayaa in ay gooyeen isku socodka Muqdisho iyo Jowhar iyaga oo si gaar ah u bartilmaameedsaday gaadiidka ay la socdaan mas’uuliyinta ...